के तपाईलाई निद्रा लाग्दैन ? एकैछिनमा फुस्स निदाउन अपनाउनुस् यो विधि
आइतवार, जनवरी 26, 2020
यी हुन शरीरमा गडेको काटा गलाएर फाल्ने जडिबुटीहरु
यस्तो छ माघे सङ्क्रान्ति र यसको महत्व
जनवरी 3, 2019 साइन्स इन्फोटेक	5 Comments निद्रा
मिठो निद्रा स्वस्थ्य रहनको लागि उति नै जरूरी छ । धेरै थकाई लागेर ओछ्यानमा पल्टिँदा पनि सुत्न नसकेर तनाव हुन्छ धेरैलाई । कोही मनतातो दूध पिएर सुते निद्रा लाग्छ भन्छन् भने कोही चाहिँ भेडा गनेर बसे निदाइन्छ भन्छन् । तर कुनै पनि विधि आफैंमा रामवाण होइन । हामी यहाँ तपाईंलाई सही तरिकाले श्वास लिएर छिट्टो निद्रामा पर्ने विधि सिकाउँछौं । तपाईंले यो विधि नियमित रूपमा अपनाउनुपर्ने हुन्छ । बिहान उठेपछि अनि बेलुका सुत्ने बेलामा यो विधि अपनाउनुस् । यो विधिले तपाईंलाई आनन्ददायक निद्रा दिन्छ अनि तनावपूर्ण स्थिति, उच्च रक्तचाप र प्यानिक आक्रमणलाई पनि रोक्छ ।
१. श्वास भित्र तान्नुस्
शुरूमा जिब्रोलाई अघिल्लो दाँतको भित्रपट्टि मुखको च्यापुमा लगेर टाँस्नुस् । त्यसपछि बिस्तारै सास तान्नुस् अनि मनमनै चारसम्म गन्नुस् । सास रोक्नुस् अब शान्त रहेर सास रोक्नुस् र सातसम्म गन्नुस् । तपाईंको शरीरले अब अक्सिजन सोस्ने प्रशस्त मौका पाउँछ र सबै अंगलाई ऊर्जा दिन पाउँछ । रगतमा अक्सिजनको मात्रा बढ्छ र तपाईंको शरीरले आनन्द महसूस गर्छ ।
२. सास बाहिर फाल्नुस्
सास बाहिर फाल्दा आठसम्म गन्नुस् । तपाईंले सकेसम्म विना अवरोध सास बाहिर फाल्नुपर्ने हुन्छ । शान्तखालको स्स्स्स् आवाज सुन्नुभयो भने तपाईंले सही गर्दै हुनुहुन्छ । बिस्तारै सास बाहिर फाल्दा प्रयोग भएको हावा तपाईंको शरीरबाट पूरै निस्केको संकेत हो । यसको राम्रो साइड इफेक्ट भनेको तपाईंको नाडीको चाप घट्छ र तपाईं थप शान्त हुनुहुन्छ । तनाव घटेको तपाईंले सजिलै थाहा पाउनुुहुन्छ ।
अलिकति अभ्यास गर्नुभयो भने यो जस्तो स्थितिमा पनि काम गर्छ । तपाईंलाई भयंकर तनाव वा त्रासको स्थिति भयो भनेपनि यो गर्दा शरीर सेकेन्डभरमै शान्त हुन्छ । उच्च रक्तचापविरुद्ध लड्न यो राम्रो उपाय हो । मिलाएर सास फेर्दा यो सम्भव छ ।शुरूमा बिहान र बेलुका चारचोटि यो अभ्यास गर्नुस् । दुई महिनापछि भने आठचोटि गर्नुस् । नियमित अभ्यास गर्दा मात्र यो प्रभावकारी हुन्छ । अनेकथरी औषधी खानुभन्दा यो विधि अपनाएर मजाले सुत्न सकिन्छ ।
निद्रा लागेन भने यसो गर्नुस्
लामो आयु बाँच्नका लागि अपनाउनैपर्ने तरिकाहरु
चाँडो बुढो हुन नपरोस् भन्नका लागी ध्यान दिनुपर्ने सुत्रहरु
← स्वास्थ्यको लागि नरिवलको तेलका फाइदाहरु
त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रमा आगलागी →
फ्रेवुअरी 25, 2019 फ्रेवुअरी 25, 2019 साइन्स इन्फोटेक 6
डिसेम्बर 30, 2016 जनवरी 3, 2019 साइन्स इन्फोटेक 5
रातभरि मनमा कुरा खेलेर निद्रा लागेन भने यसो गर्नुहोस्
जनवरी 8, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
5 thoughts on “के तपाईलाई निद्रा लाग्दैन ? एकैछिनमा फुस्स निदाउन अपनाउनुस् यो विधि”
Pingback:निद्रा लागेन भने यसो गर्नुस्
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् निद्रामा मानिस झस्किने कारणहरु
Pingback:रातभरि मनमा कुरा खेलेर निद्रा लागेन भने यसो गर्नुहोस्
Pingback:शास्त्र भन्छ : सुत्ने समयमा यी ५ चिजहरु सिरानीमुनी राख्नुस्
Pingback:खानापछि निद्रा किन लाग्छ ?
गर्भस्थापक फार्मुला जानौं र प्रयोग गरेर फाइदा उठाऔ
आज खण्डग्रास सुर्यग्रहण लाग्दैछ, ग्रहण लाग्दा के गर्नुहुँदैन ?
के छ त गोत्र प्रणालीको वैज्ञानिक आधार ?
भण्डारीलाई विज्ञान तथा प्रविधि पत्रकारिता पुरस्कार
नाष्टले भोली १६ पुरस्कारबाट २७ जनालाई पुरस्कृत गर्दै